Wararka Maanta: Sabti, Sept 8 , 2012-Ciidamada Dowladda Somalia iyo kuwa Midowga Afrika oo Maanta la wareegay gacan ku haynta Degmada Warsheekh
Jen. Maxamed Maxamuud Saneey oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan jirin wax iska caabin ah oo ay kala kulmeen xoogagga Al-shabaab, isagoo xusay inay halkaas isaga carareen markii ay ku dhaqaaqeen.
"Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saakay la wareegeen gacan ku haynta degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellada dhexe, halkaasoo ay ka talin jireen kooxihii nabadda kasoo horjeeday," ayuu yiri Jen. Maxamed Saney.
Degmada Warsheekh oo Muqdisho dhinaca bari ee xeebta badweynta Hindiya kaga beegan qiyaastii 60-km ayaa la sheegay in xalaadeedu daggan tahay, iyadoo ciidamadu ay degmadaas iyo hareeraheeda ka billaabeen baaritaanno.
Ma jiro hadal kasoo baxay Al-shabaab oo ku saabsan qabsashada degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellada dhexe, sidoo kalena ciidamada AMISOM kama aysan hadlin qabsashadan, waxaase ay sheegeen toddobaadkii hore inay la wareegeen gacanta ku hanta dekedda Ceelmacaan oo ay sheegeen in Al-shabaab ay kala soo degi jirtay hub.
Degmadan ayaa waxay noqonaysaa tii saddexaad oo ku taalla gobolka Shabeellada dhexe oo ay la wareegaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee caawinaya, iyadoo saraakiisha dowladda ay sheegayaan inay ku wajahan yihiin degmada Jowhar oo ah xarunta gobolka Shabeellada dhexe.